ဆေးစိမ်​ပြီးသားယိုးဒယားခြင်ထောင် | ရန်ကုန် | ads.com.mm
​ဆေးစိမ်​ပြီးသားယိုးဒယား ၉ပေခြင်ထောင်ကြီးတွေပြန်​ရောက်ပါပြီနော် ၉ပေဆို​ပေမဲ့ဆိုဒ်ပြည့်ရုံတင်မကကျော်နေလို့ ၁၀ပေလောက်ရှိပါတယ်နော် ဇာအသားအရမ်းကိုကောင်းတာ အာမခံပေးပါတယ်နော် အိမ်က၂ယောက်အိပ်မွေ့ယာနဲ့ ၁ယောက်အိပ်မွေ၂လုံးဆက်ထောင်တာ တောင်ပိုနေသေးပါတယ် မိသားစုအိပ်ပြည့်ပြည့်ကြီးကို ဆေးလဲစိမ်ပြီးသားပါနော်
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကြည့်မည် စာဖြင့်အကြောင်းကြားမည် 10,000
ဇန်နဝါရီ 10, 16:13
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကြည့်မည် စာဖြင့်အကြောင်းကြားမည် ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
ကြော်ငြာကိုထိပ်ဆုံးပို့မည် ရောင်းသူထံစာပို့မည် Seller
ဤကြော်ငြာကို ads.com.mm မှတွေ့ရှိသည်ဟုပြောကြားပေးပါ။ အန္တရာယ်ကင်းစွာဆောင်ရွက်ပါ!
ရိုးရှင်းစွာဆောင်ရွက်ပါ။ မိမိနယ်မြေဒေသတွင်းသာဆောင်ရွက်ပါ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးမှသာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပါ။
ဤကြော်ငြာကိုAds.com.mmအားအသုံးပြုသူတစ်ဦးမှတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြော်ငြာထားသောပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးနှင့်စစ်မှန်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် Ads.com.mm မှအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ ကြည့်ရှုသင့်သောဆင်တူကြော်ငြာများ
ဗဟို အင်​ဗာတာ ၁ထောင် ဝပ်​
Ads.com.mm မှာပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကို အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ရောင်းလိုက်ပါ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ယခုကြော်ငြာနှင့် ပက်သက်၍မှားယွင်းမှု(သို့)လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ရှိသောကြော်ငြာများကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီကောင်းမွန်စေရန် အမြဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ထံမှမည်သည့်အကြံပြုချက်များကိုမဆိုဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံဆန်းစစ်လျှက်ရှိပါသည်။